Excellent ကအပူချိန် Range
မြတ်သော Acoustic ဂုဏ်သတ္တိများ
ကောင်းမွန်သောတံဆိပ်ခတ်ခြင်းဂုဏ်သတ္တိများ (လေ၊ ဖုန်နှင့်ရေများရွှေ့ပြောင်းခြင်း)
Lead Times သတင်းစာ
EPDM ရာသီဥတုနှင့်အိုဇုန်းလွှာကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ အပူကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ အပူချိန်နိမ့်ခြင်းနှင့်ဓာတုပစ္စည်းများဖြစ်သည်
NR မြင့်မားသော elasticity, ကောင်းသောဓာတုအစွမ်းသတ္တိ
CR ယေဘုယျအားဖြင့်အိုဇုန်းလွှာ၊ အိုမင်းခြင်းနှင့်ဓာတုပစ္စည်းများဒဏ်ခံနိုင်ခြင်း၊ အပူချိန်ကျယ်ပြန့်စွာကောင်းမွန်သောစက်မှုဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်
ဆီလီကွန် အနိမ့်ဆုံးလည်ပတ်မှုအပူချိန်အကွာအဝေး၊ မြင့်မားသောနှင့်နိမ့်သောအပူချိန်များတွင်စွမ်းဆောင်ရည်တည်ငြိမ်မှုရှိပြီး၊
A: ကျွန်ုပ်တို့သည်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် Hebei ပြည်နယ်၊ Xingtai မြို့၊ Ren ခရိုင်တွင်တည်ရှိသည်။
A: ပုံဆွဲခြင်း၊ ပစ္စည်း၊ အရေအတွက်နှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များကိုအီးမေးလ်ဖြင့်ပို့ခြင်းဖြင့်သင်မကြာမီစျေးနှုန်းများရလိမ့်မည်။
A: ဖြစ်နိုင်သမျှကျွန်တော်တို့ကိုထုတ်ကုန်များ၏နမူနာ, ရုပ်ပုံများသို့မဟုတ်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ပေးပို့ပါ, ကျနော်တို့အတည်ပြုဘို့သင်တို့ကိုပြန်လာပါလိမ့်မယ်။
မေးကျွန်ုပ်တွင်ထုတ်ကုန်အသစ်တစ်ခုအတွက်အကြံဥာဏ်ရှိသည်။ သို့သော်၎င်းကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်ရှိမရှိမသေချာပါ။ သင်ကူညီနိုင်မလား?
အေဟုတ်ကဲ့! သင်၏အကြံဥာဏ် (သို့) ဒီဇိုင်း၏နည်းပညာဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်ချေကိုအကဲဖြတ်ရန်အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များနှင့်အတူတကွလုပ်ဆောင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အမြဲတမ်း ၀ မ်းသာပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပစ္စည်းများ၊ ကိရိယာတန်ဆာပလာများနှင့် set-up ကုန်ကျမှုများအတွက်အကြံဥာဏ်များပေးနိုင်သည်။
မေးကျွန်ုပ်၏စိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်များကို CAD တွင်တီထွင်ပြီးဖြစ်သည်။ ပုံဆွဲလို့ရမလား
အေဟုတ်ကဲ့! DWG, DXF, IGES, Solidworks နှင့် Rhino ဖိုင်များကိုကိုးကားခြင်း၊ မော်ဒယ်များနှင့်မှိုပုံစံကိရိယာများထုတ်လုပ်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည် - ၎င်းသည်သင်၏အစိတ်အပိုင်းများကိုထုတ်လုပ်ရာတွင်အချိန်နှင့်ငွေကိုသက်သာစေသည်။
မေး ကျွန်ုပ်၏ဒီဇိုင်း / ထုတ်ကုန်အတွက်မည်သည့်ပလပ်စတစ်၊ ရာဘာပစ္စည်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သနည်း။
A:သင်၏အရည်အသွေးအကဲဖြတ်မှုအတွက်အခမဲ့နမူနာကိုရရှိနိုင်သည်၊ သို့သော်သင်ကုန်ကျစရိတ်ကိုပေးသင့်သည်။ စိတ်ကြိုက်ထုတ်ကုန်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ နမူနာနှင့်မှိုအမှာစာများသည်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ခြင်းမပြုမီ ဦး စွာပြုလုပ်လိမ့်မည်။
ကားတံခါးနှင့် Window Seal Strips